carrefour ကအကြောင်း – Zox Zin Min
Written by Zox Zin Min May 19, 2009
ဒီနေ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ ဂျူတီအပြီးလမ်းလျှောက်ရင်း ဒူဘိုင်း Bus stand ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။ တနေကုန် အလုပ်တွေနဲ့ပဲ နပန်းလုံးရင်း အလုပ်ပြီးချိန်မှာ အညောင်းအညာပြေ လမ်းလျှောက်ကြတာပါ။ ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ မြန်မာစကားကို အားရပါးရပြောရတဲ့ အချိန်လိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အဲဒီသူငယ်ချင်းက ကွန်ပျူတာဆက်စပ်ပစ္စည်းဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်တာပါ။ ကျွန်တော့်ဂျူတီက ညနေ ၅း၀၀ နာရီပြီးပေမယ့် သူ့အလုပ်ပြီးချိန် ည ၁၀း၀၀ နာရီကိုစောင့်ရင်း သူနဲ့အတူတူ ၁၀း၀၀ ကျော်မှ ထွက်လာဖြစ်ပါတယ်။ ဘတ်စတန်းကိုလည်းရောက်ရော ထူးထူးခြားခြား တခါမှ အားတယ်ဆိုတာ မတွေ့ရတဲ့ Taxi တွေ၊ အားလုံးခါလီနဲ့ လူခေါ်နေတာကို တွေ့လိုက်ရလို့ ကျွန်တော်တို့ ၂ ယောက်ကြည့်ပြီး အံ့သြနေမိကြပါသေးတယ်။
ဘတ်စ်စတန်းကို လာတယ်ဆိုတာကလည်း ဘတ်စ်တန်းရဲ့ ဟိုဘက်မှာ Super Market အကြီးကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ အအေးဝယ်သောက်၊ ဘယ်အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းဈေးပေါနေပြီလည်း ဘာလည်းကြည့်ဖို့ လာခဲ့တာပါ။ ကမ္ဘာနဲ့အ၀န်း အီလတ်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေ ဈေးပေါနေချိန်မှာ ဒီမှာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လလောက်က ၁၈၀၀ ကျော်လောက်ရှိတဲ့ Laptop တွေကိုအခု ၉၀၀ ကျော်နဲ့ ဒီစူပါမားကက်ကြီးမှာ ရောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ သူ့နံမည်ကတော့ Carrefour ပါ။
အပြင်ဆိုင်တွေထက်စာရင် ဒီမှာကဈေးသက်သာလို့ အအေးဘူးလေးကအစ ကျွန်တော်တို့တတွေဒီမှာပဲ ၀ယ်လေ့ရှိပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းဒီရောက်တဲ့ အအေးကောင်တာကိုသွား အအေး ၂ ဗူးကိုတစ်ယောက်တစ်ခုဆီကိုင်ရင်း မြန်မာပြည်က အကြောင်းတွေကို ရောက်တတ်ရာရာပြောနေမိကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာအချင်းချင်းတွေ့ဆုံချိန်မှာတော့ အဓိကမြန်မာပြည်ကအကြောင်းတွေကိုပဲ ပြောဖြစ်ကြတာများပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့်ဇနီးလေးကို လွမ်းတဲ့အကြောင်းပေါ့။ တခါတလေကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေကတောင် ကျွန်တော့်ကို အမြင်ကတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့် နားလည်ပေးကြပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့လည်း ပြန်မယ်အလုပ်မှာ ဟိုမကျ၊ ဒီမကျ အခြောက်တစ်ယောက်ကို ဒီဈေးကြီးထဲမှာ တွေ့လိုက်ပါတယ်။ သာမန်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့လည်း သတိထားမိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူပုံစံက အသားကလည်းမည်းမည်း၊ ဗိုက်ကလည်းရွှဲနေပြီး ထိပ်ပါပြောင်နေပါသေးတယ်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းက နဂိုကတည်းက ခပ်နောက်နောက်လူဆိုတော့ အဲဒီအခြောက်မလာခင်ကတည်းက အဝေးကနေအမျိုးမျိုးလုပ်ပြနေပါတယ်။ တဖြေးဖြေးနဲ့ ပိုက်ဆံရှင်းခါနီးမှာ သူကကျွန်တော်တို့ အနားရောက်လာတော့ ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းကလည်း ထုံးစံအတိုင်း မြန်မာလိုအားရပါးရ ပေါက်ကရဟာသတွေကို သူ့ကိုကြည့်ပြီးပြောတာပေါ့။ မကြာပါဘူး။ သူကကျွန်တော်တို့ကို စိမ်းစိမ်းကြီးစိုက်ကြည့်ရင်း ” သေနာကောင်တွေ” ကနေအစပြုလို့ မြန်မာလိုအမျိုးမျိုး ပြန်ဆဲသွားပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့။ ခင်ဗျားတို့ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ သူကလည်း မြန်မာဖြစ်နေပါတယ်။
2 thoughts on “carrefour ကအကြောင်း”
အဲဒီဆီကို အဲလိုလူမျိုးလည်း ရောက်နိုင်ပါတယ်လေ။ ဒါနဲ့ စကားမစပ် . . .
သူငယ်ချင်းရေ… အဲဒီလို နိုင်ငံခြားအတွေ့အကြုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေးမယ်ဆိုရင် ခရီးသွား လမ်းညွန်ဆန်ဆန်ရေးရင်ဖြစ်ဖြစ် သူတို့ရဲ့ ဓလေ့စရိုက်ကိုဖြစ်ဖြစ် ရေးရင် ပိုကောင်းမယ်။ ပြီးတော့ နေရာတစ်နေရာရဲ့ ထူးခြားချက်။ သမိုင်း စသဖြင့်ပေါ့
အော် ဤအဖြစ်မျိုးလည်း ရှိသလား..
Previous Post From .. Kaung ma lay
Next Post ငါ့ရဲ့သက်တမ်းတစ်ခု